I-Indonesia iba ngowokuqala ukusayina iNgqungquthela yeenqobo ezisesikweni zoKhenketho kwi-UNWTO
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » I-Indonesia iba ngowokuqala ukusayina iNgqungquthela yeenqobo ezisesikweni zoKhenketho kwi-UNWTO
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • Xanduva • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Oktobha 2, 2020
IRiphabhlikhi yase-Indonesia iye yaba ngowokuqala ukusayina iNgqungquthela yeNkqubo-sikhokelo yeenqobo ezisesikweni zoKhenketho.
Lo msitho ububanjwe ngu Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) eMadrid, linyathelo elibalulekileyo ekuqinisekiseni isiVumelwano, esamkelwa kwintlanganiso yama-23 ye-UNWTO General Assembly ngoSeptemba 2019. Ngeli candelo lijamelene nobona bunzima bukhulu kwimbali yalo, ukusayina kwanamhlanje ibiluphawu olucacileyo. aMazwe angamaLungu ajonge kwi-UNWTO kubunkokheli obomeleleyo kwaye bahlala bezibophelele kwimishini yabo yokusebenzisa eli nqumama njengethuba lokuhlengahlengisa ukhenketho.
INgqungquthela yanconywa "njengenyathelo elikhulu eliya phambili" ekungeniseni ikhowudi yokuziphatha esemthethweni ebophelelayo, nelinye lawona macandelo abalulekileyo kwezoqoqosho nezentlalo. Kumsitho okhethekileyo obuzinyaswe ngummeli welizwe eSpain uBapak Hermono nowabanjelwa kwikomkhulu le-UNWTO, i-Indonesia yaba lilizwe lokuqala ukusayina, ibonakalisa ukuzibophelela kwayo ekuxhaseni imigaqo-nkqubo ephezulu yokuziphatha njengoko isandisa icandelo layo lezokhenketho.
I-Indonesia idlale indima ebalulekileyo ekuyileni iNgqungquthela njengenxalenye yeKomiti eguqule iKhowudi yeenqobo ezisesikweni kuKhenketho yaba sisixhobo esibophelela ngokusemthethweni kwilizwe liphela. Ilungu eliliLungu ukusukela ngo-1975, ngoku lisebenzisana ne-UNWTO ukuqala ukhenketho emva kwesibetho se-COVID-19, ngoSeptemba 2020, i-UNWTO iqhube intlanganiso ebonakalayo kunye noMphathiswa Wezangaphandle Wezangaphandle kunye noMphathiswa Wezokhenketho kunye noQoqosho loBugcisa kunye URhulumente weNgingqi waseBali ukuphonononga izisombululo zokuvulwa kwakhona kweBali ngokukhuselekileyo kubakhenkethi bamanye amazwe. Ngokuphathelene noku, uncedo lobuchwephesha oluvela kwi-UNWTO luya kubonelelwa kungekudala.
UHarry S. Johnson usebenze kwishishini lokuhamba kangangeminyaka engama-20. Waqala umsebenzi wakhe wokuhamba njengomlindi wenqwelomoya eAlitalia, kwaye namhlanje, ebesebenzela iTravelNewsGroup njengomhleli kule minyaka ili-8 idlulileyo. UHarry ungumhambi okhutheleyo wehlabathi.
Ungasinda njani ekuhlaselweni sisilwanyana sasendle?
Umgaqo-siseko wase-US kunye neSibhengezo senkululeko ngoku ...
Uhambo lokuzonwabisa lubhejo olukhuselekileyo kwi-Air France
Ukuhamba noKhenketho e-Indonesia: Ingxelo ye-COVID Impact Report
IPoland ibhengeza imeko kaxakeka kumda weBelarus ...
Umzi-mveliso weenqwelo moya: 2020 yayiyeyona nyaka imbi kakhulu kwiRekhodi
URajasthan Wenza ukungaziphathi kakuhle kubakhenkethi ulwaphulo-mthetho
IJamaica ilungele iintlanganiso ezibalulekileyo neCanada kunye ...
Indawo yoLonwabo ye-OTDYKH iya kubanjwa eMoscow ...
Ummandla weGulf ophumayo woKhenketho kunye neNtengiso yezoKhenketho ukuya eSoar ...
Ukhenketho kufuneka lubandakanywe ekufumaneni isitofu ...
I-2021 iOshkosh igqithile kulindelo lwabaququzeleli be-EAA ...
Bonke abemi baseMelika bayalelwe ukuba bashiye iAfghanistan ...
IMartinique iyavala, ixelela abakhenkethi ukuba bahambe
Iindiza ezisuka eMoscow ziye eHurghada naseSharm El Sheikh kwi ...
Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika Usasaza uMyalezo weThemba e ...
Ukuthintela imali yeenqwelo moya kusongela ukubuyela kwimeko yesiqhelo kushishino
Uhlaselo olunobundlobongela obuChasene noVax kwiStudiyo saseLondon
Iinqwelomoya eziMangalisayo zeF-117 Nighthawk Stealth ...